Ndizikhuphela njani iifoto ukusuka kwi-Instagram ukuya kwiKhompyuter yam? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ndizikhuphela njani iifoto ukusuka kwi-Instagram ukuya kwikhompyuter yam?
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 267
Kwenzekile kuninzi lwethu oko sifuna ukugcina umxholo Sipapashe nge-Instagram, kodwa asazi ukuba masenze njani, oku kuyenzeka kuba ngamanye amaxesha kuyenzeka kuthi ukuba sizilayishe iifoto ngokuthe ngqo kwisicelo sethu ukuba sizigcina ngaphambili, okanye singaqondanga sizicima kwimemori yethu iselfowuni okanye iiselfowuni kwaye sinento esiyipapashe kwiiakhawunti zethu.
Sukuba nexhala apha ngezantsi, siza kukunika iindlela ezininzi zokukhuphela imifanekiso ofuna ukuyigcina kwiakhawunti yakho ye-Instagram kwikhompyuter yakho. Sincoma oko hlonipha umxholo wabantu besithathuKungenxa yokuba ungafikelela kumxholo kwaye uyikhuphele oko akuthethi ukuba kulungile ukwenza njalo.
Olu hlobo lwesenzo unokukhetha izicelo ezahlukeneyo, Yonke into iya kuxhomekeka kukhetho lwakho kwaye ezi zilungelelanise ngeyona ndlela ifanelekileyo kwiimfuno zakho kunye nenkqubo yakho yokusebenza. Apha siza kukubonisa indlela yokusebenzisa ezinye zazo.
Ngenye ye kulula ukuyisebenzisa. Into yokuqala kukuyikhuphela kwaye uyifake ngokuchanekileyo kwi-PC yethu.
Singena kwifayile ye- Ukukhuphela usetyenziso, oya kuthi usiphambukisele kwi-Instagram ngokungagqibekanga.
Nje ukuba ungene ngaphakathi kufuneka ufumane okanye ukhethe ifoto okanye upapasho ofuna ukulikhuphela, cinezela amachaphaza amathathu (· Saka'e) uze ucinezele ukhetho lwe "Yiya kupapasho."
Khetha kwaye ukope i-URL.
Isicelo si izakukhathalela ukhuphelo ngokuzenzekelayo.
Kubasebenzisi abaninzi esi sesona sicelo sithandwayo sokukhuphela imifanekiso ye-Instagram, kuba ikuvumela ukuba ukhuphele imifanekiso kunye neevidiyo, zombini kwiikhompyuter zethu nakwiifowuni ze-Android
Kule meko emva kokukhuphela kunye nokufaka, Kuya kufuneka senze iakhawunti yomsebenzisi, ukufikelela kwisicelo.
Nje ukuba le nkqubo yenziwe siyangena Instagram kwaye sikhetha umfanekiso wokhetho lwethu.
Kule meko kufuneka ungene kwi-Instagram web usebenzisa Esi sixhobo siza kukuvumela ukukhuphela kwiinkqubo ezisebenzayo zeWindows okanye, ukusilela oko, iMACOS, kulula ukuyisebenzisa kwaye ayifuni ukuba usebenzise usetyenziso lomntu wesithathu.
Kufuneka ungene kwiakhawunti yakho ye-Instagram ngegama lakho lomsebenzisi kunye negama lokugqitha kwi-Instagram web.
Yiya kwi-DownlaodGram. Cola idilesi ye-URL kwicandelo eliboniswe yinkqubo yesicelo, iya kwenziwa ngokuzenzekelayo.
Ngoku kufuneka ucinezele icandelo "Ukukhuphela" Ukusuka kwisicelo kwaye ulinde ukukhutshelwa kwesithombe okanye umfanekiso ofuna ukuwugcina.
2 Ukukhawuleza kwi-Instagram:
3 Ungayenza njani:
4 Ukukhuphela kwangoko.
6 Ungayenza njani:
Khuphela indlela yokuqeqesha inamba yakho 3
Ndihamba kanjani kwiTwitch Xbox One?